I-Bayern Munich ne-Chelsea bazongena kwi-quarter-final ye-UEFA | Scrolla Izindaba
I-Bayern Munich ne-Chelsea bazongena kwi-quarter-final ye-UEFA
Abaphethe isicoco se-UEFA Champions League i-Bayern Munich ne-Chelsea yiwona amaqembu amabili okugcina angene esigabeni sokugcina samaqembu ayisishiyagalombili kulo mqhudelwano.
Bajoyina i-Paris Saint-Germain, I-FC Porto, i-Liverpool, i-Manchester City, i-Real Madrid ne-Borussia Dortmund.
Lo mqhudelwano, ohlanganisa nemidlalo eyandulela eyamanqamu, uzoba se-Nyon, e-Switzerland, e-House of European Football kusukela ngo-11 ekuseni ngoLwesihlanu.
I-Bayern ishaye i-Lazio ngamagoli amabili eqandeni ngoLwesithathu, yase inqoba ngokulingana ngamagoli amane kwamabili sekuhlanganiswe yombili imilenze.
Okomdlalo wabase-Bavaria ngoLwesithathu bekungokwesiko nje, futhi i-Lazio beyazi ukuthi ayinalo ithuba lokulondoloza i-tie.
ENgilandi, i-Chelsea ibinomsebenzi obekufanele iwenze ngaphambi kokuba iqede umdlalo ibhekene ne-Atletico Madrid.
Baye kulo mdlalo behamba phambili ngegoli elilodwa eqandeni emlenzeni wabo wokuqala, bakwazile ukuqeda umsebenzi ngokunqoba ngamagoli amabili eqandeni ebusuku kwathi ngamagoli amathathu eqandeni sekuhlanganiswe imilenze yombili.
Le mpumelelo ibone umqeqeshi uThomas Tuchel ephula irekhodi likaLuiz Felipe Scolari elide lokungahlulwa ngumqeqeshi oyinhloko emlandweni weqembu uTuchel oseyenze yaba imidlalo eyi-13 ilandelanayo. Emaqenjini ayisishiyagalombili asesele kulomqhudelwano i-Chelsea izojoyina amanye amaqembu amabili aseNgilandi, i-Man City ne-Liverpool.
Ama-quarter-final ale sizini asho ukuthi kuzobe kungokokuqala kusukela ngesizini yowezi-2004-05 ukungabi bikho kukaCristiano Ronaldo noma uLionel Messi. Womabili amaqembu abo i-Juventus ne-Barcelona bakhishwe ku-last 16 ngesonto eledlule.
Umthombo wesithombe: @nagendra